Amawele i-ANC, iFresh´n Rebel iguqula imodeli yayo yempumelelo | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 10/06/2021 11:30 | Ukuhlaziywa ukuba 10/06/2021 12:46 | ngokubanzi, Reviews
Ehamba nokumiliselwa kwakutsha nje kwe Uhlaziyo olutsha lweClam Elite, Ifemi nayo igqibe kwelokuba inike umoya opholileyo kuluhlu lwamawele, ii-headphone zayo ezimibalabala ze-ANC ezifumene uphononongo oluninzi. Ngoku baya kuba nenqaku elongeziweyo eliya kwenza ukuthenga kwakho kube nomtsalane ngakumbi, kwaye kurhoxiswe nengxolo esebenzayo.
Sihlalutye nzulu amawele amatsha e-ANC aphuma kwiFresh´n Rebel, i-headphones ezingenazingcingo eziyinyani ezinokurhoxiswa kwengxolo kunye noyilo olunomdla. Hlala nathi kwaye ufumene iindaba zokuba u-Fresh'n Rebel ucebise ngale modeli yentloko ye-TWS esele siyazi ngaphambili.
3 Ukurhoxiswa kwengxolo kunye nolawulo lweaudio
4 Umgangatho womsindo kunye namava omsebenzisi
Kule meko iFresh´n Rebel ithathe isigqibo sokubheja kuluhlu lwayo oludumileyo lwemibala, siya kuba nayo, nganye inegama layo lentengiso kwezi toni zilandelayo: Igolide, ipinki, luhlaza, bomvu, luhlaza okwesibhakabhaka kunye nomnyama. Kule meko, ibhokisi iphinde yenziwa ngokutsha, isuka ekubeni yinkqubo yokuvula ephezulu ukuya kwisitayile "segobolondo". Ibhokisi inemilinganiselo efanelekileyo yokudibanisa kunye neegophe ezinkulu zokugcina ngokulula. Ngokwenxalenye yayo, ngaphakathi siya kuba nesalathiso se-LED senqanaba leefowuni kunye neqhosha lokuvumelanisa.
Ii-headphone zisendlebeni, i-tonic eqhelekileyo yee-headphone I-TWS xa benokurhoxiswa kwengxolo esebenzayo. Banoyilo oluya kuthi luqheleke kuthi, ngaphandle kokuba lide kakhulu, zibanzi kakhulu. Ngokumalunga nentuthuzelo, zilula kwaye zineepads ezahlukeneyo, ke ngekhe sibe neengxaki ekubekweni kwazo. Ubunzima bebonke besixhobo sisi-70 iigram, nangona singazi bobabini imilinganiselo yecala lokutshaja kunye nobunzima bee-headphone ngokwahlukeneyo. Nangona kunjalo, kufuneka sigxininise ukuba sinokumelana namanzi, ukubila kunye nothuli ngesiqinisekiso se-IP54, ukuze sizisebenzise ukuqeqesha ngaphandle kwengxaki.
Njengesiqhelo, asazi olona hlobo luqinisekileyo lwe Bluetooth ukukhwela, nangona kuthathelwa ingqalelo isantya sokudibanisa kunye nokuzimela, yonke into ibonisa ukuba uFresh'n Rebel ukhethe i-Bluetooth 5.0 eqhelekileyo. Sinee-sensors ezikufutshane eziza kuthi xhaxhe umxholo wemultimedia xa sizisusile ezindlebeni zethu, kuya kwenzeka okufanayo xa sizibuyisela umva, ukuba umculo uya kuqhubeka ukukhala ukusuka kwindawo owawukuyo. Yintoni egqithisile, ii-headphone zezi Master ezimbiniOko kukuthi, zinokusetyenziswa ngokwahlukeneyo kuba zombini zidibanisa ngokuthe ngqo kunye nomthombo weaudiyo.
Ngokumalunga nokuzimela, asinayo idatha malunga nomthamo kwi-mAh, kodwa sifumene iiyure eziyi-7 zokuzimela ngee-headphone kwiseshoni enye, lIbrand ithembisa phakathi kwe-7 kunye neeyure ezili-9 kuxhomekeke kwimowudi yokurhoxisa ingxolo esiyenzileyo, idatha ehambelana nohlalutyo lwethu. Ukuba sibala izityholo ezinikezelwa leli tyala, ukuzimela kufikelela kwiiyure ezingama-30 xa singayisebenzisi i-ANC, enokuhla iye kufikelela kwiiyure ezingama-25 ukuba siyayisebenzisa. Ngokwenxalenye yayo, intlawulo epheleleyo yebhokisi iya kuba ziiyure ezimbini, malunga neyure enesiqingatha ukuba sifuna ukubiza ngokupheleleyo ii-headphone.
Ukurhoxiswa kwengxolo kunye nolawulo lweaudio
Ukucinywa kwengxolo kuya kusebenza xa siyisebenzisa, ngenxa yoku siya kuchukumisa ii-headphone, kuba zinepaneli yokuthinta. Ukongeza, sinokukhetha i "Indlela yokusiNgqongileyo" eya kuthi ibambe inxenye yengxolo ngokusebenzisa ii-microphone ukuze inikeze inkqubo yokuzihlukanisa eyingozi kwiimeko ezithile.
Ukucinywa kwengxolo esemgangathweni: Iya kucima yonke ingxolo ngomthamo omkhulu.
Ukurhoxiswa kwengxolo kwanele kuluhlu lwamaxabiso esijongana nawo, Ngokucacileyo zikude lee kwezinye iindlela ezinje nge-AirPods Pro, nangona kunjalo, ukuba nje sibeka iipads kakuhle, ukucinywa kwengxolo kuya kuba nomtsalane ngokwaneleyo. Kubonakala ngathi akuchaphazeli kakubi i-bass kunye ne-mids kuvavanyo lwethu, nangona siyeke ukubona iithoni ezithile ezibuthathaka. Kweli candelo asinakuphikisa ukuba sijonga kwimarike kunye nexabiso elibonelelwa ngezinye iindlela ezinokurhoxiswa kwengxolo esebenzayo esinokuthi siqwalasele.
Umgangatho womsindo kunye namava omsebenzisi
Kuphosakele ukuba uFresh'n Rebel ukhethe ukuhlanganisa amawele e-ANC kwinkqubo yokulinganisa ngokwesiko esiyifumana kwiClam Elite. Nangona kunjalo, Ii-headphone zifika kakuhle ukuzilinganisa, nangona zihlala zisenzeka kolu hlobo lweemveliso, zilungiselelwe ngokukodwa ukubonelela ngesiphumo esingcono ngomculo wanamhlanje wentengiso. Sinobukho be-bass elungileyo kunye nevolumu ephezulu kakhulu, into ephawuleka ekubeni siya kuthi siyidibanise nokucinywa kwengxolo okusebenzayo.
Kwinqanaba lokunxibelelana abakhange babenangxaki, xhuma ngokukhawuleza kwaye ngokulula, njengaxa ubukho Master ezimbini Sikwazile ukusebenzisa eli thuba ukudibana neefowuni enye ngamanye amaxesha. Banxibelelene ngokukhawuleza nomthombo weaudiyo ngendlela efanayo abathi banqamle kwaye bamise umculo xa sibabeka kwimeko, kweli candelo amava ayathandeka. Kwinqanaba lokufaka ilizwi lethu kwimakrofoni, zanele ukubamba iincoko, nangona le ayisiyiyo eyona nto iphambili kuyo, ayibonisi ngamava esinokuthi siyiqwalasele embi.
kwaye inyani kukuba abashiyi naliphi na icandelo elinencasa embi emlonyeni ekuqwalaselweni kwalo. Ityala lokutshaja lihlala kamnandi, liyasebenza kwaye lihlala ixesha elide. Ngokwenxalenye yayo, ii-headphone zisezindlebeni, into ephantse inyanzeleke kwii-headphone ze-ANC kwaye iwela ngaphakathi kweeparamitha "eziqhelekileyo". Ngaphandle kwamathandabuzo umnikelo omtsha kunye nomtsalane kwakhona ovela kuhlobo olujolise kakhulu kulutsha olunenjongo yokudala amava ajikelezayo, ngaphandle kokuzenzisa kakhulu kodwa oko kuzalisekisa kanye oko bekuthembisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Amawele i-ANC, iFresh´n Rebel iguqula imodeli yayo yempumelelo